Microsoft OneDrive setup inokonzeresa yakakwirira yeCPU kushandiswa [Kuzara Fix]
OneDrive iri pasina mubvunzo inobatsira kune vakawanda Windows vashandisi vanoda huwandu hwakanaka hwekuchengetedza. Nepo iyo app ichiita basa rakanaka kugadzirisa mafaera ako, zvinoita sekunge iyo OneDrive setup haina nyadzi kutora chikamu chayo chekushandisa kwako kweCPU. Heano maitiro ekuzvidzikisira pasi. Dzosera zviwanikwa zvako nerubatsiro rweCUU Usage Guides. Usakanganwa kuisa bhukumaka kune yedu OneDrive… [Verenga zvakawanda ...] nezve Microsoft OneDrive setup inokonzeresa kushandiswa kwepamusoro kweCPU [Full Fix]
Maitiro ekudzorera mafaira akadzimwa kubva kuOneDrive [Kurumidza kutungamira]
Kufungisisa maitiro ekudzosera zvirinyore mafaira akadzimwa kubva kuOneDrive? Iwe uri nhanho shoma kubva pakuzadzisa zvinangwa zvako. Kunge Trash mu mac OS, Dzokororazve Bin mukati Windows inochengeta yako yese yakadzimwa dhata kwechinguva. Kuti uwane mhedzisiro, iwe unogona zvakare kushandisa yakanakisa data kudzoreredza software ye Windows 10. Kana iwe ukatsvaga mhinduro dzakafanana, tinokukurudzira kuti ubhuye bhuku redu OneDrive… [Verenga zvakawanda ...] nezve Maitiro ekudzoreredza mafaera akadzimwa kubva kuOneDrive [Kurumidza Gwara]